158 no emoji vaovao nampidirin'i Apple ao amin'ny iOS 12 | Famoronana an-tserasera
Emoji no lasa singa ilaina resaka resadresaka sy famoahana amin'ny tambajotra sosialy hamelomana ny seho ary azonay an-tsary tsara kokoa ireo hafatra nalefa tamin'ny endrika samihafa.
Apple dia nanampy fotsiny emoji vaovao miisa 158, isan'izany ny redheads, ny maherifo ary na dia ny tsiky iray mamo aza mba hanehoana fa nahafinaritra anay kely tamin'io vera divay Ribera io.
Ireo emoji vaovao ireo dia misy amin'ny mpampiasa rehetra izay manana iPhone na iPad, toy ny iPad Pro 2018 vaovao izay vao navotsotra omaly. anisan'ireo emoji vaovao 158 Misy fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny firazanana, ary koa ny maro hafa toy ny mena, lehilahy sola, maherifo faran'izay mahery vaika, ratsy toetra ratsy ary maro hafa.
Tsy banga a lmandrora, ny kangaroo ary koa ilay tarehy mamo izay nantsoina hoe Woozy Face. Izy io dia miaraka amin'ny fanavaozana ny kinova iOS 12.1 izay ahafahan'ny mpampiasa iPhone sy iPad manana ireo emojiis vaovao 70 eny an-tànany.
Misy koa a emoji be fitiavana miaraka amin'ireo fo ireo, ny iray mankalaza ary ny iray somary malahelo fa feno tomany ny tavany. Na dia ilay manome ny naoty aza dia mpimamo ary azo antoka fa hampiasaina amin'ny fety Krismasy izay matetika latsaka ny cava sy zava-pisotro misy alikaola hafa.
Inona no ataontsika tahaka azy ireo ny mena no tsy adino. Miaraka amin'ny volo olioly, volo fotsy ary lehilahy sola ary efa manana ny emoji-ny izy ireo. Aza adino fa raha te hampiasa ireo karazana fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny firazanana isika dia tsy maintsy manao gazety lava hifidianana izay tiana. Raha atotaly dia misy fiovana 12 samihafa ho an'ny emojis sasany ka tsy misy tavela amin'ny lalao amin'ity emoji Apple vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Emoji vaovao 158 nampiana an'i Apple: mena mena, maherifo ary maro hafa
Julian Aladren Gallego dia hoy izy:
Valiny tamin'i Julian Aladren Gallego